Izindaba - Imiphumela yokunakekelwa kwesikhumba kawoyela abalulekile ezingxenyeni ezahlukahlukene zomzimba
Amafutha abalulekile ayizitshalo zezitshalo ezikhishwe ezimbalini zemvelo ezimsulwa, amaqabunga, amakhasi, imbewu, amagatsha nezinye izingxenye, kanye nama-molecule ezitshalo anephunga elimnandi. Izici zezitshalo ezimsulwa zigcinwa ngaphandle kokuhlanganiswa okungeziwe. Inemiphumela ehlukile esikhunjeni, emzimbeni nasemphefumulweni.
Isisindo samangqamuzana kawoyela obalulekile singu-1/3000 wamaseli ezitshalo, okuyizinto eziphindwe kayizi-1000 kunamaseli omuntu. It is kalula amuncwa isikhumba. Ifinyelela ku-epidermis ngeminithi elingu-1, i-dermis ngemizuzu emi-2, nohlelo lokujikeleza kwegazi ngemizuzu eyi-10-15. Ngesikhathi esifanayo nesikhumba, singaphatha nesikhumba ngaphakathi.
Amafutha abalulekile asetshenziswa ebusweni ukuhlanza nokwenza isikhumba sibe sihle. Khumbula ukuncibilikisa ngamafutha ayisisekelo ngaphambi kokuyisebenzisa ebusweni. Isilinganiso sokuphepha esiphephile ngamaconsi angu-1-5 kawoyela omsulwa no-5ml (cishe amaconsi ayi-100)
Ngokuvamile, ama-roses, izimbali eziwolintshi ezibabayo nolamula kuvame ukusetshenziselwa ukwenza mhlophe ebusweni nokugcinwa. Impepho ne-rose kuvame ukusetshenziselwa ukulwa nokuguga. I-cypress ne-rosemary zivame ukusetshenziselwa ukucubungula nokuqina; Kunconywa i-lavender, itiye noma i-geranium ngesikhumba esinamafutha nesinenkinga!
2.Umhlathi othambile nesisekelo sogebhezi:
Ukufaka isicelo kulezi zindawo ezimbili kungasiza ekushintsheni imizwelo nokulinganisela kwemizwa. (Ulwanga oluthambile ulenga ngokulinganayo noma ngokuma phezulu ngenhla kolimi futhi lwakhiwe ukunwetshwa kwemisipha ye-pharyngeal palatine neminye imisipha. Kuyingxenye yezicubu ezihlukanisa umgodi womlomo nepharynx, ngakho-ke inomsebenzi ukwehlukanisa uhlelo lokuphefumula nohlelo lokugaya ukudla.Izansi yomgodi we-cranial (Obizwa ngesisekelo sogebhezi, okuyingxenye ebalulekile kwezokwelapha)
Kunconywa ukusebenzisa inhlaka yempepho, i-sandalwood, i-patchouli nemure.
Intamo, ibunzi namathempeli:
Lapho kunokungezwani ekhanda nasentanyeni, ukufaka uwoyela obalulekile kulezi zingxenye ezintathu kungasiza ukukhulula!
Kunconywa ukusebenzisa i-lavender, i-mint nenhlaka yempepho!
Ukufaka uwoyela obalulekile esifubeni kungakhuthaza ukugeleza okushelelayo kwemigwaqo yomoya futhi kusize ekugcineni umoya ophilile, ohlanziwe!
Phakamisa amafutha abalulekile asetshenziswa kakhulu e-oxide: I-Eucalyptus ne-rosemary, phefumula kahle!
Faka owoyela ababalulekile esiswini, ikakhulukazi izitho ezinkulu zokugaya ukudla, ukusiza ukugaya okunempilo nokuqeda ukungakhululeki kokugaya ukudla kwesinye isikhathi.
Kunconywa ukuthi usebenzise owoyela ababalulekile be-ginger, coriander, fennel emnandi nopelepele omnyama.
Faka amafutha abalulekile esibindini ukusiza ukukhipha ubuthi nokuhlanza nokuxhasa umsebenzi wokuhlanza nokuhlanza izitho zomzimba.
Kunconywa ukusebenzisa ilamula, ubhamubhamu, i-geranium kanye nomjunipha.
7.Izikhali, imilenze nomhlane:
Ukufaka uwoyela obalulekile wokuhlikihla izingalo, izihlakala, imilenze, emuva kanye ematheni ezinyawo kungasiza ukukhulula izicubu zomzimba ezikhathele nezibuhlungu, futhi kukhuthaze ukujikeleza kwegazi.
Kunconywa ukuthi usebenzise uwoyela we-wintergreen, i-lemongrass, ne-cypress.
Ukufaka isicelo ematheni ezinyawo kungakhuthaza ukumunca okusheshayo kwamafutha abalulekile, ngoba ama-pores asezinyaweni kulula ukuwamunca, okungamafutha abalulekile, aphephile futhi alula ukumunca. Amathe ezinyawo ngokuvamile athathwa njengokuxhumana phakathi kwezitho nezitho zomzimba ezahlukahlukene. Kunezingxenye eziningi ezibizwa ngezindawo ze-reflex. Imvamisa ukuvuselela izindawo ezinengqondo kufana nokwenza izitho ezihambisanayo noma izitho. Akulula ukukhumbula indawo ngayinye yokubonisa, vele ufake uwoyela obalulekile kulo lonke unyawo!
Kunconywa ukusebenzisa imizwa ezolile, inhlaka yempepho, i-vetiver, i-ylang ylang